Yaa lahaa go’aankii uu Zinedine Zidane kaga soo tagay Kooxda Juventus uguna biiray Real Madrid? – Gool FM
Yaa lahaa go’aankii uu Zinedine Zidane kaga soo tagay Kooxda Juventus uguna biiray Real Madrid?
(Yurub) 05 Abril 2020. Sanadkii 2001, waxaa kubadda cagta qaaradda Yurub ka dhacay saxiixii ugu qaalisanaa xilligaas iyo midkii ugu miisaanka cuslaa kaddib markii Zinedine Zidane uu Real Madrid kaga soo biiray kooxda Juventus.
Zidane ayaa doonayay inuu ku biirro caasimadda Spain kooxda ka dhisan inkastoo kooxda Taliyaaniga ah ay isku dayday inay hor istaagto saxiixaas sida uu shaaciyay Luciano Moggi oo ahaa agaasimihii guud ee Juventus xilligaas.
“Qolka lebiska ayaan kala soo baxay markii ay soo dhammaatay ciyaartii Atalanta aan la ciyaarnay kaddib, waxa uu cadaadis nagu saarayay inuu u hayaamo Spain, anigana waxaan u sheegay in Florentino Perez aan ogeysiinaayo inaan ka iibineyn,” ayuu yiri Moggi oo dib u milicsaday u dhaqaaqistii Zidane ee Real Madrid.
“Florentino wuu ogaa inuu bixinayo lacag badan haddii uu saxiixa Zidane doonayo.” ayuu u sheegay Juventibus.
Cadaadiska halyeyga Faransiiska uu saaray Bianconeri ayaa ugu dambeyn qasabtay in 9-ka bishii July sanaddii 2001 uu ku biiro Los Blancos.
Saxiixaas waxay kooxda reer Spain ku dhammeystirtay lacag dhan 75 milyan oo euro isagoo noqday saxiixii ugu qaalisanaa kubadda cagta xilligaas, balse waxa uu noqday mid miro dhal ah.
Georgina Rodriguez oo noqotay Timo-jaraha cusub ee Cristiano Ronaldo muddada lagu jiro karaantiilka Coronavirus